नेपाली चर्चित गायिका टिका सानुको विहे भएकै हो त ? – भिडियो हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > नेपाली चर्चित गायिका टिका सानुको विहे भएकै हो त ? – भिडियो हेर्नुस्
admin October 25, 2020 October 25, 2020 जीवनशैली, भिडियो, मनोरञ्जन	0
गायिका टिका सानु अहिले लोकदोहोरी क्षेत्रकै एकदमै अनुशासित, सरल, सबैसँग मिठो बोल्ने दोहोरी गायिका हुन।हेर्दा जति सोझी र सरल देखिन्छिन्, वास्तविकता पनि त्यहि रहेछ । चाहिदो मात्र बोल्ने, अरुको विषयमा त्यति रुचि नराख्ने, आफ्नो संघर्षले अगाडी बढ्छु भन्ने भावना बोकेकी रहिछिन् । उनी लगभग १० बर्ष अगाडीदेखि यो क्षेत्रमा लागिरहेकी छिन् । उनको पूर्खौली घर दाङमा रहेछ । छोरी नै छोरी भएको परिवारमा धेरै संघर्ष गरेर जीवन बितिरहेको थियो ।
उनको आमा पनि गीतसंगीतमा रुचि राख्ने रहिछिन् । धेरै सन्तान भएको कारणले अनि उनका बुबाले राम्रोसँग कान नसुन्ने भएको कारणले गर्दा उनकी आमा बिदेशिनु पर्यो । जसोतसो गरी उनी आफ्नो गायिका बन्ने रहर मेट्न सहर पसिन् । तर यो सहर उनले सोचेजस्तो सजिलो भने पाइनन् । अझ उनी सोझी र सरल भएका कारणले गर्दा उनलाई यो समाजमा टिक्न एक समय हम्मेहम्मे नै पर्यो ।
सोचेजस्तो नभईदिदाँ उनी फेरि गाउँ नै फर्कन्छु र आफ्ना रहरलाई तिलाञ्जली दिन्छु भन्ने सोचमा पनि लागिन् । विस्तारै विस्तारै मान्छे चिन्दै गइन् । यो सहरमा घुलमिल भइन् अनि दोहोरीमा गीत गाउन सुरु गरिन् । धेरै बर्ष मेहेनत गरिन् अनि उनको सोझो पनको फाइदा उठाउन पनि धेरैजना लागि परे ।
धेरै ठाउँमा लाइभ दोहोरी गाउँदै जादाँ एकदिन उनले इन्द्रेणीमा जाने अवसर पाइन् । उनको मिठो बोली, सरल गीत गाउने शैली देखेर सबैको नजरमा उनी पर्न सफल भइन् । त्यसपछि इन्द्रेणीमै कलाकारको रुपमा आफूलाई स्थापित गरिन् ।धेरैले प्रश्न गर्ने गर्छन् उनलाई, तपाई किन परिवर्तन नहुनु भएको ? धेरै सम्पत्ति कमाउनु भयो, दोहोरीमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसक्नु भयो अब त आफूलाई पनि बदल्नुस् न ।
यस्तो भन्नेहरुलाई उनी सरल भाषामा मलाई पहिले देखि नै यहि परिचयले चिनिरहनु भएको छ, मलाई यस्तै नै दर्शकले रुचाउनु भएको छ भने म किन परिवर्तन हुनु भन्छिन् । यसकारण पनि उनी पछिल्लो समय सबैको प्रिय भइन् । ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
श्रीमान गुमाएकि आमाकाे आलो घाउ नसुक्दै जवान छोराकाे शव फेला परेपछि यस्तो बिलौना, कसको मुख हेरेर बाँचौं ?(भिडियो हेर्नुस्)